Ciidmada Ammaanka ee Beledweyne oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa | Radio Muqdisho	Wednesday, May 22nd, 2013	Bogga Hore
Ciidmada Ammaanka ee Beledweyne oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa
Published on June 20, 2012 by Mowliid · No Comments · 1,832 views
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa faahfaahhin ka bixiyay qaraxyo lagu diyaarinayay guri ku yaala magaalada Beledweyn ee xarunt agobolka Hiiraan, kuwaas oo la doonayay in lagu dhibaaateeyo shacabka Soomaaliyeed.
Ku xigeenka guddoomiyaha gobolka Hiiraan eee dhinaca Ammaanka Axmed Cisman Inji ayaa Radio Muqdisho u sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen Qarax lagu diyaarinayay guri ku yaalla magaalada Beledweyn kadib markii ay ka warheleen.
“howlgal ay xalay sameeyeen ciidamada ammaanka ayaa lagu soo qabtay qarax lagu diyaarinayay guri ku yaalla Magaalada Beledweyn, kaas oo ka koobnaa gumacyada Hoobiyaha, baaruud iyo qalab kale oo loo adeegsado Qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed, sidoo kale waxaa la soo xiray ninkii lahaa guriga lagu diyaarinayay Qaraxa iyadoo ciidamadu ay haatan su’aalo weydiinayaan” ayuuu yiri Axmed Inji.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in ciidamadu ay haatan ku raadjoogaan nin kale oo ay heleen akhbaartiisa kaas oo ku lug leh qaraxyada dhagarta ah ee loo maleegayo shacabka Soomaaliyeed.
Magaalada Beledweyne ayaa wax aay ka mid tahay meelaha ugu daran ee malleeshiyaadkaasi ka geeysteen xasuuqa shacabka, iyadoo la xasuusto qaraxii lagu dilay in ka badan Todobaatan qofood oo ka mid ah qeybaha bulshada reer Beledweyne iyo wasiirkii amnniga qaranka Cumar Xaashhi Aadan.
Wararka	Baarlamanka oo maanta kulmay iyo mowshinkii ka dhanka ahaa xukuumadda oo laga laabtay
Baarlamanka Soomaaliya oo maanta kulmay iyadoo mudanaayal ka ...	R/waasaare Saacid oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergayga Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya
R/waaaraha Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergayga ...	Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Oo la kulmay madaxweynaha dalka Sudan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa kala hadlay hay’adaha maashaariicda ...	Tubta Toosan	Diinta Islaamku maxay ka qabtaa Dhagarta?-DHAGEYSO